Unai Emery oo ka hadlay guuldaradii Tottenham iyo ka haristooda tartanka Carabao Cup – Gool FM
Unai Emery oo ka hadlay guuldaradii Tottenham iyo ka haristooda tartanka Carabao Cup
(England) 20 Dis 2018. Macainka kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka hadlay guuldaradii 2-0 ahayd ee kasoo gaartay kooxda Tottenham Hotspur, isla markaana ay isaga hareen tartanka Carabao Cup.
Waxaa la soo saaray isku aadka Afar dhammaadka Koobka Carabao Cup waxaana meesha kasoo baxay kulan Derby London ah ee aad u xiiso badan kadib markii qoorta la isku galiyay Chelsea iyo Tottenham, halka Manchester City lagu beegay kooxda yar ee Burton Albion.
Hadaba macalinkii hore kooxda Paris Saint-Germain Unai Emery ayaa ka hadlay ka haristooda tartanka Carabao Cup wuxuuna yiri:
“Waxaan qabaa inaan sameynay sidii aan dooneynay, waxaan abuurnay fursado aan goolal ku dhalin gaarnay qeybtii hore ee ciyaarta, lakiin waxtarkeena ayaa noqday midaan nagu filneyn”.
“Waxay heystaan tayo ay ku awoodeen inay gool ku dhaliyaan, fursadii ugu horeesay waxaa helay Mkhitaryan mana aanan ka faa’ideysanin, balse fursadoodii ugu horeysay ay heleen waxay ku dhaliyeen gool”.
“Waan ku faraxsanahay qaab ciyaareedkii aan sameenay, laakiin natiijada ciyaarta kuma faraxin”.
Jadwalka ay ku ciyaareyso kooxda qurbo joogta ah ee Som United oo lasoo saaray